Iyini i-SEO nge-Intent Marketing?
Ukumaketha ngenjongo yonke ngokuhlanganisa i-SEO nokuqukethwe. Uma uxubene ngokuhlakanipha, i-SEO nokukhangisa kokuqukethwe kube yisikhali esingenakulinganiswa esiza ibhizinisi lakho ukuba liphume esixukwini sabancintisanayo.
Ngo-2017, ukuhlangana nokuguqula ukufunwa kwamakhasimende kungokwenza ukuthi umkhiqizo wakho ubonakale, ukhuthaze futhi uthande amaklayenti. Ngisho noma abantu abaningi bathanda ukucabanga ukuthi izinqumo zabo zisekelwe emaqinisweni nasengqondweni, imizwelo isadlala indima ebalulekile ekwenzeni izinqumo zansuku zonke. Abantu bavame ukukhumbula okuhlangenwe nakho, hhayi umbhalo. Yingakho ukukhiqiza imibhalo ehambisana nezilaleli zakho kuyisihluthulelo sokubandakanyeka kokuqukethwe.
Okuqukethwe kuyisici esiyinhloko sohlelo lokuthengisa lwe-SEO
Eminyakeni embalwa edlule, ukuthengwa kwe-intanethi kuye kwaba enye yezindlela ezikhethwayo kakhulu zokuthenga. Yingakho isizathu esiyinhloko sokuthi okuqukethwe kuwebhusayithi yakho kufanele kulungiswe ngangokunokwenzeka ukuze uhlanganyele futhi ukhange amaklayenti angakhona noma ngabe ukuphi. Ngenhlanhla, ungakwazi ukufinyelela kalula le njongo ngokuhlanganisa i-SEO nemizamo yokukhangisa kokuqukethwe ibe umsebenzi owodwa.
Khumbula, ukucinga injini yokusesha kubalulekile ekutholakaleni kokuqukethwe. Into yokuqala okudingeka uyenze ukukhomba amagama angukhiye asungula intando yokuthengisa. Le datha izokusiza ukuba uqonde kangcono inhloso yamakhasimende, okuzokwenza, ekusizeni, ukukhiqiza okuqukethwe kokuqala okungenzeka ukuguqula.
kanjani ukuhlanganisa i-SEO nokukhangisa kokuqukethwe?
Gcina engqondweni: ukuthuthukisa uhlelo lokusebenza kokuqukethwe kokusebenza kuthatha isikhathi esiningi nemizamo. Ochwepheshe be-Semalt batusa ukuthi ucabangele lezi zindlela uma uhlela uhlelo lwakho lokuhlelwa kokuqukethwe okuphelele:
Ukwazi Abalaleli Bakho Kuyadingeka
Okulandelayo kuyinto ebaluleke kakhulu okumele uyikhumbule: konke okushiwo umkhiqizo wakho, kufaka phakathi umkhiqizo, isevisi, isipiliyoni kanye nesu lokumaketha, kufanele kuhambisane nomklayenti. Ukuchaza izethameli ezihlosiwe kukusiza ukuba udale okuqukethwe okuthakazelisayo ngezihloko ezifanele ezilungisa kahle izidingo zakho zamakhasimende.
Ngumthetho wegolide: uma uqonda izisusa zezilaleli zakho, kunamathuba amaningi okuletha okuqukethwe okunomthelela okusiza ukukhulisa imali, ukukhula komshayeli, nokwandisa ukuhlala isikhathi eside.
Ukubaluleka kokuqukethwe kokuqukethwe
Qaphela: konke okuqukethwe okukhiqizayo kufanele kube nesizathu sokuthi sikhona. Ngokuvamile, injongo yokuqukethwe ukukwazisa, ukufundisa nokujabulisa. Gcina inhloso yengqondo lapho udala isu lokuqukethwe.
Isinyathelo esilandelayo silungiselela okuqukethwe kokubonakala okuphezulu. Ochwepheshe be-Semalt batusa ukuthi usebenzise amathiphu alandelayo uma uthuthukisa okuqukethwe kwakho kusayithi:
Khetha izihloko ezithakazelisayo nezifanelekayo ezikhalazayo ngokusekelwe ezithakazelweni, ekuziphatheni nasekudaleni abantu;
Hlanganisa amagama angukhiye afanele;
Lungiselela okuqukethwe kwakho kumadivayisi eselula.
Esinye isiphakamiso ukugxila kukhwalithi, hhayi ubuningi. Khumbula, okuqukethwe okungaphezulu akusho okuqukethwe okungcono. Kusobala ukuthi abantu bafuna ukudla okuqukethwe okubalulekile okuthandwa ngabantu, okubalulekile, futhi okuwusizo kubo.
Linganisa Imiphumela Yakho Yomsebenzi Ongcono
Njengoba bethi, lokho okungalinganiswa akukwazi ukuthuthukiswa. Ngenhlanhla, lezi zinsuku ungakwazi ukunquma kalula i-ROI yakho ngokulandelela ama-metric nokuthola ulwazi lokuqukethwe kokuqukethwe endabeni yokuchofoza okumbalwa.
Ungafunda kuwo wonke umkhankaso wokuqukethwe, kungakhathaliseki ukuthi ufeze noma ufeze imigomo yawo. Ukulinganisa nokuqapha kukusiza ukuthi ubone ukuthi yini eyenza okuqukethwe kwakho okuhle kuvelele. Ngokwenza kanjalo, ungakwazi ukuphinda uphendule izindlela eziphumelelayo, ngaleyo ndlela uthuthukise isu lakho lokuthengisa le-SEO ukuze libe ngcono.
Njengoba ubona, ukuhlanganisa i-SEO nokukhangisa kokuqukethwe kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokwandisa isayithi lakho lomgwaqo nokuheha imikhakha ephezulu Source . Landela amaqhinga okukhulunywe ngenhla futhi ubone ukuthi kwenzekani kuwebhusayithi yakho yezinga eliphezulu!